Fahatokisana, haino aman-jery sosialy ary fanentanana manohana | Martech Zone
Zoma, Martsa 28, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny taon-dasa rehefa nanatrika aho World Marketing Marketing Tontolo, Nanana ny resadresaka tsy nampino indrindra tamin'i Cheryl Viirand, mpanorina ny Afaka.
Ny tantaran'i Cheryl dia zava-mahagaga fotsiny - mpisolovava izy izay niasa tamin'ny sasany tamin'ireo fividianana teknolojia lehibe indrindra nahatonga ny evanjelistra sakafo. Ny tetezamita dia nitranga rehefa nijaly tamin'ny aretina mahatsiravina sy tsy voamarina manokana sy tamin'ny zanany i Cheryl. Ny olana lehibe dia ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fahatsapan-javatra izay nanimba ny fiainany sy ny ain'ny zanany.
Tamin'ny fotoana nitrangan'ny hetsika dia sahirana mafy aho - nanitatra be ny asako tamin'ny zavatra tsy nampoiziko, namoy ny raiko ho an'i Leukemia aho, ary niady tamin'ny lanjako izay tsy voafehy. Nandritra ny taona manaraka dia nitombo lanja aho, nanana vaky 2 tao amin'ny hazondamosiko izay nanakana ny fahafahako nandeha na nanao fanatanjahan-tena, ary ory fotsiny aho.
Roa volana lasa izay, niova izany rehefa nisy namako, Ben McCann, dia niditra an-tsehatra niaraka tamiko 'malefaka'. Nanatevin-daharana ny ivon-toerany mampihena ny lanjako aho - izay nanova ny sakafoko - nifantoka tamin'ny proteinina nitombo, nanala siramamy, fructose, gliosida ary ny zavatra hafa rehetra nandevoziko tamin'ny sakafoko. Hatramin'ny nanombohako dia very 50 pounds mahery aho ary tsara kokoa ny fivezivezena. Ny fitsangatsanganana eto amin'ny fihaonambe dia tsy nampanaintaina ny ankamaroany - na dia mbola mitondra 200 pounds eo ho eo aza aho.
Omaly alina dia nanao resaka mahafinaritra iray hafa izahay sy Cheryl. Faly be izy tamin'ny fanovana nataoko ary nizara ny fomba Afaka manohy miaina. Vondron'olona mafana fo izay mizara tantara, torohevitra, fomba fahandro ary zava-mitranga momba ny fahatsapana sakafo, ny tsy fahampian'ny sakafo ary ny sakafo. Miara-miasa akaiky amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria sy orinasa miasa ao anatin'ny orinasa izy izao.
Ny resaka nifanaovanay dia nitarika anay hiresaka momba ny fomba tian'ireo orinasa ireo hanangana vondrom-piarahamonina koa. Misy olana goavana amin'ity. Ny orinasa dia miahiahy momba ny lohahevitra resahin'i Cheryl, saingy tsy hifanaraka amin'ny fitiavany an'i Cheryl mihitsy izy ireo. Tsy mbola niaina ny fijaliana nataon'i Cheryl izy ireo. Ary farany - ny tanjon'izy ireo dia ny hivarotra izay hizaran'i Cheryl. Rehefa manana vondrom-piarahamonina ny orinasa iray dia tsy mino aho fa maharesy olan'ny fitokisana satria fantatry ny olona fa misy antony manosika ny vondrom-piarahamonina hivarotra. Na inona na inona tanjon'ny orinasa dia hanao izany i Cheryl foana be atokisana Bebe kokoa.
Misy safidy hafa mahavita tsara isan'andro isan'andro amin'ny media sosialy… ary izany no izy mpanohana orinasa. Rehefa manana vondrom-piarahamonina ny orinasa iray dia ny antony manosika azy foana no resahina. Fa rehefa manohana vondrom-piarahamonina ny orinasa iray dia ankasitrahana sy valisoa izy. Amin'ny ankapobeny, ny sponsorship dia milaza hoe: "Ekenay ny fahefanao, ny fitiavanao, ny antony manosika anao ary ny fahaleovantenanao miasa manodidina an'io lohahevitra io - ary tianay ny manampy anao hampivelatra an'io vondrom-piarahamonina io satria miahy izahay."
Cheryl dia maniry ny hampitombo ny vondrom-piarahamonina ary avy eo hanome vola azy hamatsy vola ny fitomboany mitohy. Mamporisika an'i Cheryl aho hanao izany amin'ny tokony ho izy - hamerina ny volany amin'ny filan'ny fiarahamonina miaraka amin'ny fanampian'ny mpanohana - avy eo jereo ny fitomboany! Ny sandan'ny sehatra Cheryl sy ny vondrom-piarahamoniny dia tsy ny vola aloan'ny dokam-barotra amin'ny alàlan'ny tsindrio… fa mandoa ny filàn'i Cheryl sy ny zava-misy fa tsy mahavita tsy mahomby izy. Ny lohahevitra dia nifangaro tao amin'ny fiainan'i Cheryl ankehitriny satria izy dia ho manam-pahefana hatrany amin'ireo olana ireo ary hazoto hizara ny zavatra niainany sy ny fahaizany.
Imo, dia mpiandraikitra ny fiarahamonina amin'ny tranokalan'ny marika dia tsy afaka manakaiky fahombiazana amin'ny fampitahana. Ny fiarahamonina dia mifantoka amin'ny olana afovoany, ny finoana, ny politika, ny fialamboly ary ny talenta - fa tsy ny marika. Cheryl dia hahomby amin'ny toerana tsy hahombiazan'ny marika satria - farany, hafa ny antony manosika. Afaka mamofona ny antony manosika kilometatra iray kilaometatra ny mpanjifa. Izay orinasa manana talenta dia hahafantatra an'i Cheryl, via Afaka, dia fampiasam-bola mahafinaritra - ary ny loza mety hitranga amin'ny fanohanana vondrom-piarahamonina toy izany dieny mbola kely ny fitomboany dia ho mpanohana mendrika vidiana.
FANAMARIHANA: Manatreha Social Media Marketing World avy amin'ny latabatrao miaraka amin'ny pass virtual mampiasa ny rohy Affiliate!
Tags: cheryl viirandfiaraha-moninafiarahamonina sakafoafaka
Mar 28, 2014 ao amin'ny 10: PM PM
Douglas, nihaona tamin'i Cherry tao amin'ny # smmw13 ihany koa aho ary tsy isalasalana fa hanova ny fomba fandraisan'ny olona miaina ny famerana sakafo: avy amin'ny toerana misy ny fahefana, fa tsy ny tsy fahampiana. Mampientam-po ny hetsika #customeater azy, araka ny fantatrao (sy miarahaba anao noho ny fahombiazanao manokana hatreto)! Manaiky ny hevitrao momba ny marika tsy dia atokisana noho ny olona toa an'i Cherry aho. Marina indrindra izany eo amin'ny sehatry ny asako, ny fitsaboana ara-pahasalamana. Saingy ny fivarotana marika nataon'ny vondrom-piarahamonina dia tsy natao hivarotra fotsiny, ary tsy misy ny zoro mampiahiahy foana momba ny antony itiavany hanana fifandraisana tena misy amin'ireo mpanaraka. Fantatro manokana ny mpitsabo maro izay nandao ny fanazaran-tena manokana ary nanatevin-daharana marika satria fantatr'izy ireo fa mety hisy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny fahasalaman'ny fiaraha-monina amin'izany fomba izany. Na dia mety tsy mitovy amin'ny karazana fahefana itokisana sy ny fanahy tsy azo tohaina toa an'i Cherry Viirand aza ny marika iray, dia azo antoka fa misy toerana ho azy ireo ho mpanohana sy mpanohana azy ireo, araka ny soso-kevitrao, na koa ny fantsom-pandrosoana hanitarana ny fahatratrarany bilaogy vahiny, RTs sy +1. Saingy na aiza na aiza ny olona mafana fo - ary ny marika marani-tsaina mametraka azy ireo ho lohalaharana. Hanaiky ve ianao?
Mar 29, 2014 amin'ny 2: 02 AM
Lahatsoratra tsara Doug .. Misaotra nizara ..
Mar 29, 2014 amin'ny 4: 21 AM
Mar 30, 2014 amin'ny 12: 15 AM
Tongasoa Doug, mendrika ny dera ianao ..
Mar 30, 2014 ao amin'ny 9: PM PM
Ny hatsarako, Doug - Tena mendri-piderana aho ary tsy afaka misaotra anao ampy noho ny teny tsara nataonao. Ny fomba niatrehana ny fahasalamanao dia manaitra aingam-panahy - mandray fanamby ary mahazo io fihodinana baolina voalohany io dia tena sarotra tokoa. Manova izy io mba hiverenana amin'ny laoniny avy amin'ny fanamby ara-pahasalamana toa "tsy azo ovaina" - ary efa mamirapiratra amin'izany fanovana izany ianao!
Ny fitomboan'ny vondrom-piarahamonina Freedible dia dia miavaka - avy hatrany amin'ny fanombohana beta voalohany, ireo bilaogera mpihinana sakafo manokana sy marika marobe lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny sakafo "afaka" dia nitsambikina mba hanatratra ny ezaka ataon'ny media sosialy. Tena lesona tsy manam-paharoa ho ahy ny hoe rehefa mitarika amin'ny filan'ny nofo ianao dia tsy hanaraka fotsiny ny hafa fa hiara-hijoro aminao. Misaotra anao, Doug, amin'ny maha-iray amin'ireo olona ireo!
Apr 3, 2014 amin'ny 8: 10 AM
Doug.. mifanaraka aminao ny vondrom-piarahamonina dia hanao fomba azo antoka hifaneraserana amin'ireo mpanjifa mba hanehoana ireo hevi-baovao sy ny fampandrosoana ny vokatra ho avy.